I-induction brazing carbide tip kwisicelo sensimbi yamazinyo entloko
Ukuhamba rhoqo kwe-brazing carbide tip kwi-steel head process
Kolu vavanyo lwesicelo, induction brazing carbide tip kwintsimbi esebenza ngamazinyo entloko.
Ukuchithwa kwezixhobo zeBrazil
I-DW-UHF-10kw umshini wokukrazula
Icoil yokufudumeza eyenziwe ngokwezifiso
• Isinyithi sisebenza ngamazinyo entloko
• Ukuncancisa iBrazil
Ixesha: imizuzwana ye-6
Uncamathiso lweBrazil lubekwa kwisixhobo
Ezi ntloko zentsimbi zisebenza ngamazinyo.
Ibandla libekwe kwi-coil yokujika ezintathu.
Ukudityaniswa kugqitywa ngemizuzwana engama-6.
Iziphumo ezingqinelanayo kunye nokufaneleka kwemveliso yevolumu enkulu
Ukuchithwa kweCarbide Carbide yinkqubo ethile yobhedu ethi isetyenziswe ngayo into yokuthambisa incamathele kwisiseko esivelisayo ukuze kuveliswe intsika yokusika enzima kakhulu. Xa usebenzisa ukufudumeza ngokungeniswa, izinto zokuthambisa zibhangisiwe kwizinto ezisisiseko ngamaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-1900F.
iindidi Teknoloji tags ibhondi yentsimbi ye-carbide, ibhondi ye-carbide, intsimbi yokukhangela intsimbi, I-HF ibhondi ye-carbide tip, HF ibhondi yentsimbi, ibhanti ephezulu, Isantya esiphakamileyo sokubhabha icarbide tip, ukutyunjwa kwebhodi, induction brazing carbide tip, induction brazing steel, induction brazing intsimbi Post yokukhangela